अर्बौंका गुगल पासवर्ड ह्याक, तुरुन्त फेर्नुस् पासवर्ड, ह्याक हुनबाट बच्न के गर्ने त ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रविधि > अर्बौंका गुगल पासवर्ड ह्याक, तुरुन्त फेर्नुस् पासवर्ड, ह्याक हुनबाट बच्न के गर्ने त ?
अर्बौंका गुगल पासवर्ड ह्याक, तुरुन्त फेर्नुस् पासवर्ड, ह्याक हुनबाट बच्न के गर्ने त ?
काठमाडौं । गुगलले अर्बौं पासवर्ड र गुगल पासवर्ड प्रयोग गर्ने करोडौं प्रयोगकर्ताको पासवर्ड ह्याक भएको जनाएको छ ।
गएको एक साताभित्र पासवर्ड नफेरेका गुगल अकाउन्ट उपयोगकर्ताले पासवर्ड फेरेर अकाउन्ट सुरक्षित गर्न गुगलले आग्रह गरेको छ ।
साइबर विज्ञहरूले उपयोगकर्तालाई बलियो किसिमको पासवर्ड राख्न सुझाव दिएका छन् । कमजोर पासवर्ड सहजै चोरिने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको हो । यो वर्षको शुरूमा गुगलले पासवर्ड चेकअप गुगल क्रोम वेब ब्राउजरका लागि ल्याएको थियो ।
यसपछि गुगलले उपयोगकर्ताका अकाउन्ट ह्याक भएको थाहा पाएको हो । यो पासवर्ड चेकअप थालेयता ६ लाख ५० हजारले पासवर्ड चेकअप अभियानमा सामेल भएर जानएको गुगलका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन ।
गुगलको अध्ययनबाट कमजोर पासवर्डहरू बढी ह्याक भएको पाइएको छ । सर्वाधिक कमजोर पासवर्डहरूमा १२३४५६, पासवर्ड, १२३४५६७८९, १२३४५६७८, १२३४५, ११११११, १२३४५६७, सनसाइन, क्वर्टी, आइलभयु, प्रिन्सेस, एडमिन, वेलकम, ६६६६६६, एबीसी १२३, १२३१२३, मंकी, ६५४३२१, चार्ली, एए१२३४५६, डोनाल्ड, पासवर्ड१ र क्वर्टी१२३ रहेका छन ।
पासवर्ड ह्याक हुनबाट बच्न
पासवर्ड ह्याक हुनबाट बच्न तत्काल पासवर्ड फेरिहाल्न गुगलले आव्हान गरेको छ । तपाईंले प्रयोग गर्ने इमेलको पासवर्ड अंगेजी अंक, अक्षर र ह्यास, डलर, प्रतिशत, स्टार जस्ता विभिन्न साइनहरु मिश्रीत बनाउनुभयो भने पासवर्ड ह्याक हुने सम्भावना कम रहन्छ ।
आफूले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेको इमेल र फोन नम्बर तपाईं आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुले आफ्नो गोपनियता चोरी हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
२०७६ भदौ ६ गते प्रकाशित
२०७६ भदौ ६ गते १३:०० मा प्रकाशित
भारतसँग मात्रै साढे ८ खर्बको व्यापार घाटा
असोज १ गते एजिएम हुने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको छैन लाभांश
१८ प्रतिशत बोनसको यो अवसरमा तपाई पर्नु भयो कि भएन ?
फागुन १५ गते सार्वजनिक बिदा (सूचनासहित)
सोमबारको सेयरको सुखद खबर,कारोबार र नेप्से दुवै बढ्दा एभरेष्ट बैंकमै झुम्मिए लगानीकर्ता !
हेर्नुहोस् ! लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण सूचना